Carl Hill Domain Hosting
Carl Henry Facebook Video Talooyin - Sidaad u heli laheyd saaxiibo dheeraad ah Xubnaha taageerayaasha ayaa jecel
Carl Henry Global (Diiwaangelinta Seychelles - Shirkadda No. 07816855) ee 117 Orion Mall Palm Street Victoria Mahe Seychelles. Carl Henry Global iyo wax kasta Waaxda qaybta ee Carl Henry ama shirkadu waa oo aan ogolaanin Hay'adda Dhaqan-galinta Dhaqaalaha ee UK ama hay'adaha kale ee hay'adaha maaliyadeed ee caalamiga ah, mana awoodo inay bixiyaan talooyin maalgashi. Wax kasta oo ku jira boggan ama dukumiintiyada la soo iibsan karo waxaa loogu talagalay inay noqoto ama noqoto in loo qaato "dhiirrigelin dhaqaale" macnaha qaybta 21 ee Xeerka Adeegyada Maaliyadeed iyo Suuqgeynta 2000 ee UK, ama waa in loo qaato martiqaad, ama talo soo jeedin si aad uga qayb qaadato hawlaha maalgashiga. Websaydaan waxaa loogu talagalay ujeedooyinka macluumaadka oo kaliya looguma talagelin, mana sameyn, wuxuu noqonayaa talooyin maalgashi ama wax kasta oo la doonayo in la iibsado, haysto ama la iibiyo suuq ama qalab kale oo maaliyadeed. Midna Carl Henry Global waaxyaheeda ama agaasimayaashooda, saraakiisha iyo shaqaaluhuba waa inay aqbalaan wax kasta oo masuul ka ah wax kasta oo lagu kalsoonaan karo ama waxqabadyo lagu qaadey iyada oo ku saleysan mid ka mid ah macluumaadka boggan ama dukumentiyada laga soo qaaday. Waxaan kugula talineynaa ka hor intaadan qaadin go'aano maalgashi oo aad talo ka qaadato lataliye kugu habboon. Macluumaad intaas ka badan la xiriir info@carlhenryglobal.com
Dokumentigan waxaa soo saaray Carl Henry Global. ("CHG"), oo loogu talagalay ujeedooyinka fursadaha ka qaybqaadashada amaahda. Ma jiro qof la oggol yahay oo lagu maamulo Sharciga Adeegyada Dhaqaalaha iyo Suuqyada 2000 ("FSMA") ayaa laga codsaday in uu ansixiyo mawduuca Boggan ama Dukumentiyada laga soo dejiyey. Waxaa laga heli karaa UK oo ku salaysan in ay tahay dallacaadda maaliyadeed ee ka reeban Xeerka Adeegyada Maaliyadeed iyo Suuqyada 2000 (Ammaanka Maaliyadda) Amarka 2005 ("FPO") iyadoo loo marayo dadka oo keliya oo sharci ahaan iyo kuwa dabiiciga ah UK oo ku dhex jira ka-reebista sida ku cad qodobka 19 (xirfadlayaasha maal-gashiga) ama shayga 49 (shirkadaha iyo ururada qiimaha sare ee netka) ee FPO. Si gaar ah:
Carl Henry Global oo aan xakamaynin Hay'adda Dhaqan-galinta Dhaqaalaha, ama hay'ad kasta oo maaliyadeed oo kale ee UK ama dibedda. Ka qaybgalayaashu xaq uma laha in ay cabasho u gudbiyaan Wakiilka Maaliyadeed ee Boqortooyada Midowday (UK Ombudsman), ama ha noqotee haddii ay dhacdo in Carl Holder Global. si aad uga codsato Qorshaha Magdhawga Adeegyada Maaliyadeed. Dukumeentigan looma baahna inuu u hoggaansamo shuruudaha si uu u sameeyo ama ujeedo loogu talagalay Baqaar Buuxda ah, sida lagu qeexay ujeedooyinka Sharciyada Gawaarida ee Hay'adda Dhaqaalaha ee UK ("FCA"), ka qayb qaadashada dalabka lagu sharxay halkan waa loo baahan yahay in ay ku jirto xaddi lacageed oo ka badan € 100,000 qof kasta oo maal-galiya.
Dadaal kasta oo ay sameeyeen waxaa sameeyey Carl Henry Global. si sax ah u matalaan badeecadeena iyo badeecadaha aan kor u qaadno iyo kartidooda. Inkasta oo warshadaha suuq-geynta ee internetka ay ka mid yihiin kuwa midkastaa ay ku guuleysan karto dhaqaale aad u ballaaran oo leh maaliyad yar oo maaliyadeed, ma jirto wax damaanad ah oo aad ku kasban doonto lacag kasta adigoo adeegsanaya farsamooyinka iyo fikradaha boggan iyo dukumintiyada la soo iibsan karo. Tusaalooyinka ku jira qalabkan ma aha in loo tarjumo sida ballanqaad ama dammaanad ah dakhliga. Awoodda helitaanka waxay gebi ahaanba ku xiran tahay qofka isticmaalaya alaabtayada, fikradaha iyo farsamooyinka. Kama dhiirri-galinayno fursadaha tan oo ah "nidaam hodan ah".